Vidio pilina STD an-tserasera: Vidio ny ZIthromax raha tsy misy fanafody ambany $ 4
Hiditra / Hisoratra anarana
Miantsena araka ny sokajy
Ajanony ny fifohana sigara
Torolàlana momba ny fividianana
Hitantsika 2 vokatra azo omena anao
Vidiny: ambany ambany
Vidiny: avo ka ambany
mahita tory (4)
Ajanony ny fifohana sigara (2)
Mitombo haingana ny isan'izao tontolo izao ary lasa malala-tanana kokoa ny fiheveran'ny olona ny firaisana. Raha io voalaza io, ny fihanaky ny aretina azo avy amin'ny firaisana (STD) dia mety tsy ho voafehy rehefa tsy manabe ny momba ny karazan'aretina ny olona. Betsaka ny olona maty vokatry ny STD azo sitranina noho ny tsy fahampian'ny fampahalalana. Ampirisihina mafy ny olona tsy tokony hisafidy firaisana ara-nofo tsy ampiasaina na hampiasa fepetra fisorohana toy ny fampiasana fimailo.
Aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo (STD), fantatra ihany koa amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo (STI) dia areti-mifindra sy aretina ateraky ny mpamindra mikraoba bitika toy ny holatra, bakteria, viriosy ary katsentsitra mandritra ny firaisana. Ireo zavamiaina bitika ireo dia matetika hita any amin'ny ankamaroan'ny faritra amin'ny vatana toy ny vava, ny tenda ary ny faritra maha-lahy na vavy.
Ny membrane mucous an'ny filahiana, vava ary ny vava no teboka iraisan'ny STI. Io no mahatonga ny firaisana ara-nofo ho fitaovana fahita indrindra amin'ny fampitana ny aretina miteraka bakteria, na dia misy tranga mitokana aza miseho amin'ny fifandraisana tsy ampoizina toy ny fikasihana, famihina ary fanorohana.
Ity ambany ity ny lisitry ny aretina azo avy amin'ny firaisana mahazatra miaraka amin'ny fanazavana mifanaraka amin'ny antony, soritr'aretina ary fitsaboana.
Chancroid dia vokatry ny bakteria antsoina hoe Haemophilus ducreyi. Ity STD ity dia tena fahita any amin'ny firenena mahantra noho ny fiparitahan'ny firaisana ara-nofo. Araka ny fikarohana nataon'ny mpitsabo, ny loza ateraky ny lehilahy tsy voafora dia telo heny noho ny lehilahy voafora. Rehefa avy mikitroka ny bakteria manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny tapa-bolana dia misy vongan-kazo kely mipoitra mankany amin'ny fery. Ny fery dia mety mampanaintaina mafy, manana sisin-tany tsy ara-dalàna ary afaka mandeha rà rehefa voakiky. Ny chancroid dia azo tsaboina amin'ny Azythromicin, Oral Erythromycin na Ceftriaxone.
angatra dia iray amin'ireo aretina mahazatra indrindra azo avy amin'ny firaisana. Izany dia vokatry ny bakteria Neisseria gonorrheae. Ny areti-mifindra dia mety hampitombo ny mety hisian'ny SIDA atahorana noho ny fahalemen'ny faritra mucosal. Mihombo ny bakteria ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 14 andro. Ny soritr'aretina amin'ny lehilahy dia misy fanaintainana mikiaka sy famoahana pus na dia amin'ny tranga sasany aza dia tsy misy soritr'aretina amin'ny lehilahy mihitsy. Ny soritr'aretina amin'ny vehivavy dia misy ny fivoahan'ny fivaviana, ny disuria na ny fahasarotana amin'ny fivoazana, ny fadim-bolana ary ny fahatapahan'ny lalan-dra sy ny fandehanan-dra mandritra na aorian'ny firaisana ara-nofo. Ny kitrotro, ny rà mandriaka eo anelanelan'ny fotoanan'ny fadimbolana, ny tazo ary ny mandoa dia soritr'aretina mandroso amin'ny vehivavy. Ireo fambara ireo dia mety hitarika amin'ny fivoaran'ny aretina mamaivay pelvic (PID).
Herpes manana karazana aretina roa arakaraka ny roa Herpes Simplex Virus (HSV). Ny karazana HSV-1 dia ny antony mahatonga ny areti-mifindra orofacial. Io areti-mifindra io dia miseho amin'ny fivontosan'ny tazo misy mangatsiaka be matetika manodidina ny molotra fa hita amin'ny tarehy, orona, sofina ary aretin-koditra. Indraindray dia mety hoheverina ho toy ny aretin-tratra izany. Ny karazana HSV-2 dia mpiorina amin'ny herpes ara-pananahana. Ny herpes ara-pananahana dia miavaka amin'ny fery sy fery amin'ny faritra fivaviana. Ny zaza ao an-kibo dia ahiana tratran'io virus mahafaty matetika io.
Chlamydia dia aretina azo tsaboina mora azo azo avy amin'ny fanaovana firaisana amin'ny fivaviana, am-bava na amin'ny anal amin'ny olona voan'ny aretina. Izy io dia saika iray amin'ireo an'ny STD any Etazonia. Ny aretina dia vokatry ny bakteria Chlamydia trachomatis. Amin'ny vehivavy, io aretina io dia mety tsy mampiseho soritr'aretina hahatonga azy hahazo ny lazany ho valan'aretina mangina. Ny fambara fantatra amin'ny vehivavy dia misy ny fivaviana hafahafa, fanaintainana mandritra ny firaisana ara-nofo, tazo, fanaintainan'ny kibo ary fanaintainana amin'ny fivalanana na fivalanana matetika. Ho an'ny lehilahy, ny soritr'aretina dia mety ahitana tazo, fandoroana na fivontosana mangirifiry izaitsizy, fanalefahana penile tsy mahazatra, ary fivontosan'ny testicle. Tetracycline, Amoxicillin, Erythromycin, Ciprofloxacin, Azithromycin ary Doxycycline dia fantatra antibiotika afaka mitsabo an'io aretina io.
Human Papillomavirus dia mety hiteraka fitomboan'ny maso sy ny homamiadan'ny taovam-pananahana. Maherin'ny 50 ny karazana aretina amin'ity virus ity izay samy hafa ny aretina. Ohatra, ny fantsakana 6 dia miteraka ketilenta ara-pananahana, ny fantsakana 2 dia miteraka tsipika tanana ary ny fantsona 13 dia miteraka fery eo am-bava. Mety ho ny aretina 16 sy 18 no mahatonga ny homamiadana na dia aretina maro hafa aza no miteraka aretina tsy fahita firy izay mety hitarika homamiadana.
tety Aretina mora mifindra dia nahatonga ny bakteria spirochete Treponema pallidum. Ny tsimok'aretina voalohany dia ny famolavolana lesions antsoina hoe chancre izay mamindra be ny tsiranony. Rehefa miditra amin'ny ambaratonga faharoa ny aretina ao anatin'ny enim-bolana eo ho eo dia miseho ny vongan-vava amin'ny vava sy ny fery amin'ny taovam-pananahana. Mety ho tsapa ny tazo sy aretin'andoha ary hitombo ny fihary atiny. Aorian'io dia miditra amin'ny dingana latent ny aretina izay toa tsy hita ny soritr'aretina ivelany fa misy kosa ny fivontosana ao amin'ny taova anatiny. Rehefa nipoitra ny ambaratonga fahatelo dia nipoitra nantsoina hoe gummas maniry ao amin'ny taova anatiny, ny hoditra ary ny membrane mucous. Fahafatesana maro no manaraka indrindra indrindra fa ny fony efa voa mafy.
hepatita dia aretina virosy manimba ny aty. Na dia tsy nisy fanolorana mazava aza natolotra, dia efa misy ny vaksinin'ny Hepatite. Misy karazana Hepatite dimy: Hepatite A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D ary Hepatitis E.
Trichomoniasis dia vokatry ny protozoa manana sela tokana antsoina hoe Trichomonas vaginalis. Niantraika tamin'ny Amerikanina 7.4 tapitrisa isan-taona io aretina io. Izy io dia mamindra ny làlam-piterahana genitourinary tract, ny urethra amin'ny lehilahy ary ny fivaviana amin'ny vehivavy. Aretina azo sitranina izy io.
Aretim-panafody voan'ny aretina (SIDA) no aretina matanjaka indrindra amin'ny firaisana ara-nofo rehetra ary mbola tsy mahalala fanasitranana. Nateraky ny otrikaretina VIH (immode), ny SIDA dia namono olona an'arivony maro na firy taona izy na firy na firy. Ny hery fiarovan'ny vatana no tanjona voalohany amin'ny viriosy, ka rehefa mihalemy ireo mpiaro voajanahary ny vatana, dia miteraka fanafihana mahery vaika amin'ny taova lehibe ny vatana. Izany dia miteraka aretina maro amin'ny vatana izay mety hahatonga ny olona hijaly mafy mandra-pahafatiny.
Vokatra tsy misy preseta
Vidio ny Accutane tsy misy dokotera
Mividiana Amoxicilline tsy misy fanafody
Vidio Adipex tsy misy fanafody
Vidio ny Cialis tsy misy fanafody
Vidio Codeine tsy misy fanafody
Vidio Champix tsy misy dokotera
Mividiana Doxycycline tsy misy fanafody
Vidio Lyrica tsy misy fanafody
Vidio ny Tramadol tsy misy dokotera
Vidio Viagra tsy mila preskripsi
Vidio ny Xenical tsy misy dokotera
Vidio ny Zithromax tsy misy dokotera
Vidio ny Zolpidem tsy misy fanafody
Vidio ny Zopiclon tsy misy dokotera
Vidio ny Zovirax tsy misy dokotera
Vidio i Zyban tsy misy dokotera
accutane vidiny accutane hevitra accutane vokany adipex 37.5 Pilina pilina Adipex Adipex-tserasera Adipex p 37.5mg Phentermine Adipex Pilina Adipex allí levitra Amoxicillin 500 mg Amoxicillin 500mg ahoana ny fiasan'ny accutane isotretinoin vokarin'ny isotretinoin Mirtazapine 15 mg Mirtazapine 15mg Orlistat (xenical) Orlistat 60 Orlistat 120 mg Orlistat 120mg Orlistat alli Pilina Orlistat phentermine 15mg Phentermine 37.5 phentermine 37.5 mg Phentermine 37.5mg Phentermine diet pills Phentermine amin'ny Internet Phentermine amin'ny latabatra pilina phentermine Phentrmine 30mg Remeron 7.5 mg Remeron 15 mg Remeron 45 mg Remeron 50 mg Remeron hatory Fanafody remeron Remeron amin'ny Internet Xenical 120mg xenical-tserasera Orenat Xenical Xenical orlistat 120mg Xenical otc Pilina Xenical
FAQ amin'ny fiantsenana
Midira ho an'ny Gazetinay
Avelao ny mailakao hahazoana ny varotra mafana sy ny vaovao mahasoa anao indrindra!
Misorata anarana amin'ny buletinay momba ny fanavaozana tsy tapaka sy maro hafa.
© 2021 Pharmacy RXS. Zo rehetra voatokana.
Safidio ny saha izay haseho. Ho nafenina ny hafa. Tariho ary alatsaho mba handamina indray ny baiko.
Sokafy ny pejy lisitra firariana Continue fiantsenana
Fanamafisana ny hafainganam-pandeha haingana ho an'ny fampisehoana tranonkala haingana